Ndị na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ oloko China Manufacturer
Nkọwa:Oghere ọnụ ụzọ mpempe aka,Mgbape Glass Slide Door Motor,Sistem Ọnụ Ụzọ Ntugharị Akpaaka
Home > Ngwaahịa > Ọnụ ụzọ Ngwa > Na-arụ ọrụ moto > Ndị na-arụ ọrụ n&#39;ọdụ ụgbọ oloko
Ndị na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ oloko
Ihe Nlereanya.: HF-DA8
A na-eji ọnụ ụzọ dị elu eme ihe n'ọtụtụ ebe na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị ka ụlọ ọrụ nchịkwa na-enweghị ntụ, ma nwee ọrụ nke ichebe okpomọkụ na moisturizing. N'ihi na ọ na-agbanwe ngwa ngwa ma enwere ike ịrụ ọrụ ugboro ugboro n'otu ụbọchị, a na-akpọ ya ọnụ ụzọ dị ngwa. Ọnụ ụzọ kachasị ọsọ nwere ike gbanwee ngwa ngwa ma jiri ya mee ihe ugboro ugboro, ihe enyemaka kasịnụ bụ usoro zuru ezu nke moto.
Mkpụrụ ahụ bụ DC 24 volt na-enweghị ihe ọkpụkpọ na-arụ ọrụ maka arụmọrụ kpọmkwem, arụ ọrụ na-agbachi nkịtị ma na-arụ ọrụ n'efu, na-enye nnukwu ọsọ na nnukwu ọsọ ọsọ.
Ibuchi Electromechanical: Nhọrọ mkpọchi eletrik nwere dị iji nye nchebe zuru ezu ma nwee ike ịmegharị ebe enwere ike imechi mkpọchi akwụkwọ, i. E. Ọnụ ụzọ mpempe akwụkwọ a na-agbanye n'ọhịa. Mkpọchi bụ microprocessor na-achịkwa usoro mgbachi eletrik. Onye nyocha microprocessor nyochaa akụkụ niile nke ọrụ mkpọchi. EG Iji hụ na a mechibidoro ụzọ ahụ mgbe mkpọchi ahụ dị 100%. Ntinye ngwụcha dị iji gosipụta na nchekwa nche ma ọnọdụ ọnụ ụzọ ma mkpọchi mkpọchi.
Na-ekpuchi ya site na akwụkwọ ọnwa 18
1. Site ogologo ndụ, onye njikwa Na-eji usoro nhazi usoro mgbawa CPU dị elu. E gosipụtara parameter arụmọrụ na dijitalụ.
2. A na-edozi mkparịta ụka nke ọma na nimberly.
3. Nwere ike jikọta usoro nhazi njikwa
Ndị nnweta nhọrọ
Ngwaahịa : Ọnụ ụzọ Ngwa > Na-arụ ọrụ moto
Okpokoro Aluminom ngwa ngwa Rolling Shutter n'Ọnụ Ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
PVC dị elu na-arụpụta ọrụ na-emepe ọnụ ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Ọnụ Ụzọ Mkpuchi Mkpuchi Ikuku Kpọtụrụ ugbu a
Oghere ọnụ ụzọ mpempe aka Mgbape Glass Slide Door Motor Sistem Ọnụ Ụzọ Ntugharị Akpaaka Oghere ọnụ ụzọ Zipper Oghere ọnụ ụzọ mgbochi Ọnụ ụzọ mepee akpaaka Oghere ọnụ ụzọ nke Aluminom Ọnụ ụzọ mpepụ akpaaka